Sisin-tany mahasalama 12 tokony hapetrakao amin'ny fifandraisanao (+ Ahoana) - Fifandraisana
Sisin-tany mahasalama 12 tokony hapetrakao amin'ny fifandraisanao (+ Ahoana)
Ny teny dia mamela icicle ao am-pon'ny olona tia.
Nolazaina tamintsika fa ny fitiavana dia tokony ho saha tsy misy idiran'entana malalaka misokatra ary toerana misy unicorn sy matoatoa no mamorona tapestry mahatalanjona ny fitiavantsika miaraka amin'ny siramamy sy fahatokisana eo noho eo.
Raha ny marina, arakaraka ny maha-be ny efitrano mihazakazaka tsy voasivana, dia vao mainka hanao dia lavitra isika ka hianjera amin'ny tavantsika.
Ilaina ny fetra, ary tsy misy na inona na inona momba azy ireo milaza fa tsy afaka miova izy ireo.
Tsy tokony hoheverina ho teritery henjana natao hanempotra fifandraisana izy ireo.
Tokony, afaka, ary manao fanovana izy ireo, ka izay no antony maha-zava-dehibe ny firesahana azy ireo.
Ireto misy karazana fetra 12 tokony hodinihinao amin'ny fifandraisanao.
1. Andrasana amin'ny ankapobeny
Voalohany, tokony hiresaka foana ny zavatra antenainao avy amin'ny olona iray ianao, ary ny zavatra antenainao horaisina.
Ny 'fanantenana' dia mahazo rap ratsy ao Romanceville, fa raha mieritreritra ny andrasana ho fenitry ny fitondran-tena izy dia lasa mora kokoa ny mandray ny fetra miaraka aminy.
Betsaka ny olona miditra amin'ny fifandraisana mametraka ny enta-mavesatra amin'ny fanasitranana / mamita azy ireo amin'ny olon-kafa.
Tsy misy amintsika, na izany aza, misy andriamanitra, andriamanibavin'olona na totem amin'ny fahavitana.
Isika dia tena misy ary manana filàna ilaina izay mora tsy jeren'ny olon-kafa raha toa ka misy mametraka antsika amin'ny mpandeha an-tongotra.
Ny fifandraisana dia tokony fifandanjana amin'ny fanomezana sy ny fandraisana, fa tsy maka mandra-pahatongan'ny zavatra omen'ny olona iray.
Ataovy izay hiresahana ny halaviran'ny fahavononanao handeha ho lasa 'fanatanterahana' olona iray sy ny fomba tianao hamenoana azy.
Samy manana ny fetran'ny fanaintainana ara-batana ny tsirairay.
Toy izany koa ny fihetsem-po.
Ampahafantaro ny olon-tianao fa misy zavatra tsy ekenao: ny kiakiaka, nandainga , nangina, na tsy natoky tena - na inona na inona izany dia ampahafantaro fa ny fandalovana ireo fetra ireo dia dia mety tsy tian'izy ireo hatao.
3. Fanehoan-kevitra momba ny firaisana
Ny olona sasany tia firaisana ara-nofo isa-maraina. Ny olona sasany dia tia azy any amin'ny toerana hafahafa. Ny sasany manao izany amin'ny andro fialantsasatra ihany. Ny sasany dia bibidia, ny sasany miadana sy ara-nofo.
Raha tsy fantatrao sy ny olon-tianao hoe aiza ny fetra ara-nofo, dia mety handany fotoana sarobidy ny iray na ianareo roa amin'ny fanaovana firaisana ara-nofo tsy amim-pifaliana, izay mariky ny olana amin'ny faravodilanitra misy ny fifandraisana.
Ampahafantaro ny zavatra ilainao sy ny safidinao, ary koa ny habetsaky ny efitrano hanaovana andrana ao anatiny.
Ny vola amin'ny ankapobeny dia raisina ho poizina amin'ny raharaha ao am-po, fa ny vola (ho an'ny tsara kokoa na ho ratsy kokoa noho izany dia matetika no ratsy kokoa) dia ampahany tsy azo ihodivirana amin'ny fifandraisan'olombelona na miaraka amin'ny olona ianao na tsia.
Nisy stigma goavambe nifandray tamin'ny fizarana vola 'tantaram-pitiavana' taloha, fa mpivady maro kosa no mihazona misambotra ny kaonty amin'ny banky mitokana.
Tsy olana amin'ny tsy fahatokisana na ny fanantenana ny fifandraisana tsy mahomby fa resaka fanamorana.
Resaho mialoha ny fetra ara-bola azonao atao mba tsy ho voarebireby amin'ny tery aoriana.
5. Fiainana taloha
Raha tsorina dia anao ny anao taloha.
Betsaka ny olona no mahatsapa fa zony na adidiny ny mampisaraka ny lasa ny olon-tiany ka ny zavatra rehetra momba ny olon-tiana dia mivelatra toy ny ampahany hanaovana fizahana.
Ianao, na izany aza, tsy fiara fa tsy misy lohateny sy fisoratana anarana any am-paosinao any aoriana mba hatolotra olona tsy manana kodiarana handaka anao.
Ampahafantaro ny olona fa izay safidinao hambara - raha tsy hoe tsy misy fampahalalana dia mampiseho risika mivantana ara-pahasalamana na mandrahona raha tsy izany - dia araka ny hitanao.
Ny fifandraisana dia manan-danja amin'ny fifandraisana rehetra , fa ny fifandraisana dia tsy ny fandriana fitsaboana. Raha tsy hoe ary mandra-pahafahanao manao an'izany dia tsy voatery hanao boky misokatra mihitsy ianao.
Ny fifandraisana dia misy matetika eo imason'ny 'Hurricane Familia', izay tsy voatery hidika hoe fifandraisan'ny mpianakavy mahatsiravina, fa tsotra fotsiny fa ny filan'ny fianakaviana roa tonta dia hitoby manodidina ny sisin'ny fifandraisanareo.
Ny fametrahana fetra fototra amin'ny fiantraikan'ny fifandraisan'ny mpianakavy eo amin'ny fifandraisana dia hisorohana ny famerenana amin'ny laoniny vonjy maika any aoriana.
Ny olon-tianao dia tsy ho tia ny namanao rehetra mihitsy, na ny an'ny naman'izy ireo, fa tsy manakana ny olona marobe hanandrana hamantatra hoe iza ny iray hafa afaka sy tsy azony atao namana.
Mametraha fari-pitsipika fifanajana fa ny iray hafa dia afaka mandray fanapahan-kevitra mety momba izay avelany hisy vokany eo amin'izy ireo ary, amin'ny alàlan'ny fanitarana, izay avelany hisy fiantraikany amin'ny fifandraisana.
Tsy misy olona afaka miteny amintsika fa tsy misy dikany ny nofinay, na dia mieritreritra aza izy ireo fa manao izany am-pitiavana ho tombontsoantsika manokana.
Mametraha fetra: Ity no tiako / hataoko fanohanana, avela, ny undermining dia tsy.
Vonona ny hitondra zanaka ao amin'ny fiarahana ve ianao? Pets?
Ireo dia fetra sarotra sy haingana amin'ny ankapobeny entin'ny tsirairay amin'ny fifandraisana, saingy tsy te-hitondra raha tsy tena mila.
Ny fanampiana ny vondrona fifandraisana dia fifanarahana goavana ary tsy tokony havela ho azy.
Miresaka momba ny hoe iza ary inona no tianao avela mihoatra ny fari-taninao ao anatin'ny fifandraisana.
Ny fisarahana .
Toy ny fandeferana, ny dinika mialoha momba izay hataontsika sy tsy hataontsika raha sanatria tsy mandeha ny zavatra dia mety hamonjy fanaintainana sy tantara an-tsehatra amin'ny farany.
Mety ho tafiditra ao anatin'ny vanim-potoana mangatsiaka, vintana faharoa , fandaminana ny fiainana, hatrany amin'ny safidy 'andao hijanona ho mpinamana… miaraka amin'ny tombony'.
Na inona izany na inona, raha fantatry ny olon-tiantsika ny toerana misy antsika, dia azontsika atao ny mamarana ny fifandraisana amin'ny teny milamina kokoa sy ambany.
Ny fotoana, na eo amin'ireo mpitia aza, dia voafetra, ka lasa ny fanontaniana:
Inona ny fetran'ny fotoana anananao?
Amin'ny firy no tsapanao ho vonoina ianao?
Mandra-pahoviana no mila averina famerenana?
Ireo no zavatra rehetra tokony ho fantatry ny olon-tiana iray - ary te-ho fantatra - mba samy tsy hahatsapa ho mahazo aina amin'ny hoditrareo avy ianareo roa, fa eo amin'ny manodidina.
12. Fanatrehana nomerika
Amin'ny vanim-potoana iPhones sy media sosialy, ilaina ny mifanakalo hevitra ny haben'ny fidiran'ny olon-tiana amin'ny fisianao nomerika.
Fampiharana fifandraisana, fampiharana fanarahana, fampiharana kalandrie, fisakaizana amin'ny Facebook (ary fisakaizana amin'ny namana): faritany feno sisin-tany avokoa izany rehetra izany.
Mety tsy haharitra foana ny fitiavana , fa ny media sosialy, na dia tsy maharitra mandrakizay aza, dia sarotra tokoa ny mamaha azy.
Ahoana ny fomba hametrahana fetra eo amin'ny fifandraisana
Ankehitriny rehefa fantatrao ny sasany amin'ireo karazana sisin-tany manan-danja izay mety tianao hapetraka amin'ny fifandraisanareo, ahoana ny fomba fanaovanao izany?
Tsy tokony hahagaga raha mahafantatra fa ny fifandraisana malalaka sy marina no lakilen'ny famahana ny sisin-tany mahomby sy ny fanajana ireo fetra ireo.
Tsotra toy ny fanarahana ireo dingana ireo.
Dingana 1 - Fantaro ny sisintaninao
Angamba ianao nahita aingam-panahy etsy ambony ary manana hevitra momba ny fetra tianao hapetraka.
Fa na eo aza izany, ilaina ny manokana fotoana hamantarana marina hoe aiza no hijoroanao amin'ireo karazana olana resahina, ary hieritreretana ireo faritra hafa izay misy tsipika mena tokony hifikiranao.
Rehefa fantatrao ny fari-taninao, vao afaka mampita izany amin'ny vadinao ianao.
Dingana 2 - Safidio ny fotoana hiresahana azy ireo
Ny zavatra sasany dia mila resahina am-boalohany eo amin'ny fifandraisana satria izy ireo dia mety mitana andraikitra lehibe amin'ny fahafinaretanao sy ny vadinao ary ny fahasalamana ankapobeny amin'ny sendika.
Rehefa tsapanao fa tonga ny fotoana hiresahana fetra iray manokana, dia alao antoka fa hanao izany ianao rehefa afaka amin'ny fanelingelenana ary rehefa samy miala sasatra ianao ary misokatra amin'ny fomba fijerin'ny tsirairay.
Ny zavatra hafa dia afaka miandry mandra-pahatongan'ny tena fananganana azy ireo.
Tsy ilaina, ohatra, ny milaza an-tsokajy fa tsy handefitra ianao ihoraka ambara-pahatongan'ny / raha tsy mahita ny toe-javatra misy anao ianao.
Na izany aza, tsara kokoa ny miandry ny zavatra milamina mba hahafahanareo mivady miresaka amin'ny hery tsy dia be fihetseham-po loatra hanakorontanana zavatra.
Dingana 3 - Ataovy Mazava Ireo
Raha tianao ny hanaraka ny fari-taninao ny namanao dia tsy maintsy ataonao mazava sy mora azo izany.
Tsy dia misy toerana firy amin'ny faritra manjavozavo sy fotsy raha toa ka tena misy dikany aminao ireo zavatra ireo.
Asao ny mpiara-miasa aminao hamerina izay heveriny fa fari-taninao. Io dia hahafahanao mahazo antoka fa takatr'izy ireo.
Rehefa milaza ny fetrao dia ampiasao ny fehezanteny 'I' fa ny hoe 'ianao'.
Ka lazao hoe:
“Aleoko kokoa raha niantso an-telefaona ny Neny alohan'ny nahatongavany.”
“Mila miteny amin'ny reninao telefaona ianao alohan'ny hahatongavany.”
Dingana 4 - Avelao ny infraction madinidinika
Tsy misy olona tonga lafatra.
Manao fahadisoana ny olona.
Na dia misy aza mpamadika fifanarahana fa tsy hanaiky tsotra izao ianao dia mila manome làlana kely ho an'ny namanao raha miampita ny sasany amin'ny fari-taninao ianao…
… Indrindra rehefa nampita azy ireo voalohany ianao.
Angamba tsy noraharahian'izy ireo ny fanirianao ho irery mba hahafahanao miala sasatra sy mamerina miasa indray. Fahadisoana tsy manan-tsiny atao, ary ataon'izy ireo izany satria tsy azony ny ilainao.
Azo antoka fa tsy zavatra hiteraka korontana be ity… raha tsy manohy tsy miraharaha ny fihetseham-ponao hatrany izy ireo.
Ampahatsiahivo azy ireo foana ny safidinao ary tokony hanaja sy hanaja azy ireo izy ireo amin'ny farany.
Dingana 5: Fantaro hoe oviana ary ahoana no tokony hatanjaka
Mety hisy fotoana iray hihoarana ny iray amin'ireo fetra henjanao…
… Na ny vadinao mety hanao fahadisoana kely kokoa manodidina ireo zavatra izay tsy dia misy dikany aminao loatra.
Na izany na tsy izany, dia ho avy ny fotoana izay ilainao hanehoana fa misy ny vokany amin'ny fihetsik'izy ireo.
Raha tsy manao izany ianao dia hanohy tsy hiraharaha ny fetrao izy ireo.
Amin'ny zavatra sasany, ny namanao dia mila mahafantatra ny vokany alohan'ny fandikan-dalàna voalohany.
Raha, ohatra, tsy azonao ekena tsotra izao endrika fisolokiana na izany na tsy izany, tsy maintsy ataonao mazava tsara amin'ny laharam-pahamehana fa hampitsahatra ny fifandraisana ianao raha tokony hitranga izany.
Amin'ny fotoana hafa dia mety mila miresaka momba ny vokatry ny fanitsakitsahana miverimberina ny fetra tsy dia lehibe ianao.
Ka raha mijanona tara miaraka amin'ny namanao izy ireo nefa tsy manontany anao akory, dia azonao atao ny manazava fa raha manao izany izy ireo dia tokony hanantena ny handany fotoana bebe kokoa amin'ny fianakavianao vokatr'izany.
Aza matahotra ny hamerina hijery ireo adihevitra
Miova ny olona. Miova ny fifandraisana. Miova ny fetra.
Ny fari-pahasalamana mifampiresaka mazava sy mazava dia mampivondrona ny mpivady amin'ny fahalalana fa afaka miresaka izy ireo tsy misy tahotra ny famongorana na fitsarana tsy ara-drariny.
Rehefa afaka mahita isika fa ny fametrahana fetra ao anatin'ny fifandraisana dia tsy mametra izany fa manatanjaka azy tokoa, ny nofinofin'olon-jaza izay tokony hosokafan'ny olona iray ary ny antsika tanteraka dia manome ny fankasitrahan'ny olon-tiantsika bebe kokoa amin'ny maha-olona antsika tsirairay.
Ny fangatahana sy ny fanajana dia singa lehibe amin'ny fifandraisana rehetra, ary ny tena izy dia misy fetra isika rehetra, tsy manapa-kevitra foana ny hilaza azy ireo isika, na indraindray, mandinika azy ireo mihitsy aza.
Ny fifanakalozan-kevitra momba ny fetra dia tsy tokony hoheverina ho vinavinan'ny olana, fa aleo mametraka ny fitokisana sy ny finoana ny tena izy maharitra ela kokoa noho ny nofinofy tsy voafetra.
Mbola tsy azonao antoka hoe inona ny fetra apetraka amin'ny fifandraisanareo na ny fomba hanaovana izany? Miresaka an-tserasera amin'ny manam-pahaizana momba ny fifandraisana avy amin'ny Relationship Hero izay afaka manampy anao hahalala zavatra. Tsotra.
Fahendrena mifandraika bebe kokoa (mitohy etsy ambany ny lahatsoratra):
Inona avy ireo ohatra sasany amin'ny fetra ara-pientanam-po (+ Ahoana no hametrahanao azy ireo)
Ahoana ny fanajana ny sisin-tanin'ny hafa: toro-hevitra 4 mahomby be
Famantarana 7 Ny fitiavana izay tsapanao dia tsy misy fepetra (sy ny dikan'izany amin'ny fifandraisanao)
Ahoana ny fomba hampijanonana ny fifandraisan-doha amin'ny herisetra mandalo
ahoana no ahafantarana raha tia ahy ny mpiara-miasa amiko
ny fomba hiatrehana mpandainga ao amin'ny fifandraisana
ny fomba hampandeha haingana ny andro iasanao
maninona ny bandy no mibanjina ny masonao
firy taona i bray wyatt
maninona no vaky pat sy jen